Top Summer Science Programa ho an'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony
Ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny Asa atao an-tsekoly
Fandaharam-pianarana momba ny Siansa Summer for High School Students
Raha tia ny siansa ianao, dia tsara ny fandaharam-potoana
Ny fahavaratra dia fotoana tsara hijerena ny tombotsoan'ny siansa. Ny fandaharam-potoam-pahasalamana mandritra ny fahavaratra dia afaka mampiditra anao any amin'ny sehatry ny oniversite ambony ao amin'ny siansa, manome traikefa an-tanana, ary manome anao tsipika mahavariana momba ny zavatra nataonao.
Ny fandaharam-potoan'ny fahavaratry ny fahavaratra dia fomba iray tsara hianarana bebe kokoa momba ny oniversite iray fa tsy amin'ny fotoam-pamokarana ofisialy sy ny fizahantany ao amin'ny campus, ary manome fampidiram-bola sarobidy eo amin'ny fiainana an-kalamanjana. Ireto ambany ireto ny fandaharana tsara.
Programa momba ny siansa
Ny Foiben'ny Faritra Ambony dia ao amin'ny campus New Mexico Tech. Asagan / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Ny Programan'ny Summer Science (SSP) dia programa fampiroboroboana an-habakabaka ho an'ny sekoly ambaratonga ambony ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony atolotra ao amin'ny Ivotoerana New Mexico amin'ny Harena sy Teknolojia ao Sorocco, New Mexico sy College Westmont ao Santa Barbara, Californie. Ny fandaharam-pampianarana SSP dia mifototra amin'ny tetik'asa fikarohana momba ny fikarohana mba hamaritana ny arabe amin'ny asterôida, ary ny mpandray anjara dia mandalina momba ny astronomia, ny fizika, ny fizika ary ny programa. Manatrika ny famelabelarana vahiny koa ny mpianatra ary mandeha an-tongotra lavitra. Miantso mandritra ny dimy herinandro ny fandaharana. Bebe kokoa "
Ny Ivotoerana momba ny Siansa momba ny Siansa momba ny Siansa momba ny Siansa (RSI) dia fandaharam-potoan'ny fahavaratra mandritra ny taona ho an'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony izay atolotry ny Centre for Excellence in Education ary nampiantranoina tao amin'ny Institute of Technology tao Massachusetts . Ny mpandray anjara dia afaka manana traikefa amin'ny sehatry ny fikarohana rehetra amin'ny alalan'ny fampianarana amin'ny teoria siantifika sy fanao amin'ny fikarohana siantifika sy teknolojia, izay manomboka amin'ny tatitra fikarohana am-bava sy an-tsoratra. Ny fandaharam-potoana dia ahitana herinandro iray amin'ny kilasy ary fandaharam-pikarohana dimy herinandro izay ahitan'ny mpianatra ny tetik'asa fikarohana ataon'izy ireo. RSI dia tsy misy vidiny amin'ny mpianatra. Bebe kokoa "
Fikarohana momba ny siansa biolojika
Ny Diviziona Biolojian'ny Siansa momba ny Biolojia ao amin'ny Oniversiten'i Chicago dia manolotra fandaharam-potoana amin'ny fahavaratra amin'ny fikarakarana biolojika ho an'ireo tanora zandriny sy zokiny. Ny mpandray anjara dia mianatra momba ny teknolojia biôlôjika, mikrôbiolojika sy sela ampiasaina ao amin'ny laboratoire maoderina amin'ny alàlan'ny fandaharam-pampianarana mifototra amin'ny tetikasa, mianatra teknolojia fototra azo ampiharina ary mampihatra azy ireo amin'ny tetik'asa tsy miankina izay aseho amin'ny faran'ny fianarana. Mpianatra maromaro isan-taona koa no asaina ny taona manaraka hiasa miaraka amin'ny mpahay siansa mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Chicago. Miantso mandritra ny efa-bolana ny fandaharam-potoana, ary miaina ao amin'ny trano fonenana ny mpianatra. Bebe kokoa "
Simons Summer Program Fellowship Program
Ny Tranoben'ny Chemistry ao amin'ny Oniversiten'i Stony Brook. Atomichumbucker / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Mety ho liana amin'ny fandinihana ny fikarohana siantifika ao amin'ny Programa Simons Summer Research Program ao Stony Brook University ny zokiolona amin'ny ambaratonga ambony any an-tsekoly. Simons Fellows mandany ny fahavaratra miasa miaraka amin'ny mpanolo-tsaina mpanampy, miasa miaraka amin'ny ekipa fikarohana ary mikaroka tetik'asa fikarohana mahaleo tena rehefa mianatra momba ny fikarohana momba ny fikarohana ao amin'ny laboratoara ao amin'ny fikarohanam-pahaizana fakan-kevitra, atrikasa, fitsangatsanganana ary hetsika hafa manokana. Amin'ny famaranana ny fandaharam-pianarana, ny mpianatra tsirairay dia manolotra fanadihadiana an-tsoratra sy fikarohana momba ny fikarohana izay mamintina ny asany. Bebe kokoa "
Rosetta Institute Molecular Biology momba ny fanasitranana cancer
Royce Hall ao amin'ny UCLA. Sary nahazoan-dalana: Marisa Benjamin
Ny Rosetta Institute for Biomedical Research dia manohana telo atrikasa mandritra ny fahavaratra ho an'ny mpianatra 13 ka hatramin'ny 18 taona noho ny homamiadan'ny kanseran'ny molekiolan'ny UC Berkeley , ny Yale University , ary ny UCLA . Amin'ny alalan'ny fanandramana sy ny fanandramana momba ny laboratoara dia mandinika ny foto-kevitra fototra momba ny biôlôjian'ny molekiola ny mpikaroka ary ny fiantraikan'ny kansera amin'ireo rafitra sy dingana ireo. Ny mpianatra dia mampihatra ireo teoria ireo amin'ny famoronana tetik'asa fikarohana ataon'izy ireo, izay aseho amin'ny faran'ny fivoriana roa herinandro. Bebe kokoa "
Akademia Summer Academy ao amin'ny Chemistry Forensic
Ny University of Massachusetts Amherst. Massachusetts Office of Travel & Tourism / Flickr
Ireo mpianatra nianatra tao amin'ny Akademia Summer School ao amin'ny UMass Amherst ao amin'ny Chemistry Forensic dia mahazo fanofanana momba ny teknolojia ankehitriny ampiasaina amin'ny laboratoara forensics. Manatrika fivoriana izy ireo ary mitarika fanandramana momba ny lohahevitra toy ny chimikan'ny zava-mahadomelina, ny fandalinana fako, ny toxikolojika, ny fandinihan'ny ADN, ary ny famoahana dokambarotra, ary ny fianarana momba ny asan-jiolahy sy ny fanabeazana sy ny fanofanana ilaina amin'ny asam-pitsaboana. Amin'ny faran'ny tapa-bolana, ny mpianatra tsirairay dia manolotra tetikasa fanamby ho an'ny tsirairay amin'ny sehatra manokana momba ny simia. Bebe kokoa "
Boston Leadership Institute: Fikarohana biolojika
Ny fandaharan'asan'ny Boston Leadership Institute, ny fandaharam-pampianarana ao amin'ny Boston Leadership Institute, dia fandaharam-pianarana telo herinandro eo amin'ny sehatry ny fikarohana biolojika. Ny asa dia ahitana asa laboratoaram-panatanterahana, fitsangatsanganana manokana ary fitsangatsanganana mankany amin'ny toerana samihafa manodidina an'i Boston, sy ny fikarohana fikarohana lalina sy ny fampisehoana. Ny fampianarana dia ampianarina an'i Whitney Hagins, mpampianatra biology iray nahazo mari-pahaizana amin'ny iray amin'ireo sekoly ambony ao amin'ny firenena ambony ao amin'ny firenena. Afaka misafidy ny hijanona na hijanona ao amin'ny efitrano fonenana ao amin'ny Oniversiten'i Bentley any Waltham, Massachusetts ny mpianatra. Bebe kokoa "
Fandaharam-potoan'ny Astronomie mandritra ny Summer School
Fandaharan'asan'ny Mpitarika ny Summer Leadership ho an'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony
Fandaharam-pianarana momba ny siansa lehibe amin'ny Summer School ho an'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony
Fandaharam-pianarana lehibe amin'ny Summer Summer for High School Students
Fandaharam-pianarana Mozika Lehibe ho an'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony
Fandaharam-be amin'ny Dance Dance ho an'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony
Ny fandaharam-potoana tsara indrindra amin'ny Programa Summer Program
5 Ireo Mpianatr'ireo Mpianatra ao amin'ny Oniversite Te-Hahafantatra ny Namanao Anao
Fandaharam-pampianarana lehibe momba ny Summer Summer Creative ho an'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony
24 Tranokala fanta-daza ho an'ny mpianatra mpianatra
3 Fiovana izay horaisinao avy amin'ny tsara ka hatramin'ny lehibe
Ny dikany sy ny niandohan'ny Nguyen
James Buchanan, Filoha fahaefatry ny Etazonia
Fandaharam-panjakana - Georgia
Miankina amin'ny fakana an-tsokosoko ny 'Yellow Pages'
Ahoana ny hanoratana lahateny fianarana ho an'ny mpandàla valifaty
Antoko mpiangaly mozika amerikana mafana fo
Inona no lazain'ny Baiboly ao amin'ny 'The Grapes of Wrath'?
Inona no fanomezam-pahasoavana anananao?
Ny Universe Aristotle: avy amin'ny Metaphysics amin'ny Fizika
Ahoana ny fomba hanampiana ny fikojakojana ny Blues
Ahoana ny fiovana ny valan-drano momba ny valan-drano?
Mpilalao gulf miaraka amin'ny fandresena indrindra amin'ny PGA Tour Season
Ilay mpikomy Boxer ao Shina amin'ny sary
Fahasalamana ara-pahasalaman'ny sigara sigara - sigara sy fitsaboana
Ny Dia Fahatelo Filazantsaran'i Christopher Columbus
Top loharanon'ny angovo azo havaozina
Fomba 10 Hamono Ny Fandrosoana Anao Amin'ny Italiana
Nahoana no mandoro ny sainam-pirenena?
6 Ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana Amerikana dia mankahala lahateny
Fampiarahan-kevitra ao amin'ny Oniversiten'i Brenau
Fitarihana amin'ny teny sy ny fanoratana